Horudhac: Wolverhampton Wanderers vs Arsenal… (Gunners oo booqanaysa garoonka Molineux si ay u nooleyso rajadeeda tartammada Yurub) – Gool FM
(Wolverhampton) 04 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa booqaneysa garoonka Molineux Stadium si ay ugu soo dheesho kulan ka tirsan Premier League, kaasoo rajadooda tartammada Yurub ay ku xiran tahay, waxaana ay la soo ciyaaraan kooxda Wolverhampton Wanderers.
Labada koox ayaa kulammadii ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska guulo soo kala gaaray, waxaana Wolves ay 1-0 kaga adkaatay Aston Villa, halka Gunners ay 4-0 ku xasuuqday naadiga Norwich City.
Taariikhda: Sabti 04 Luulyo 2020
Tababare Nuno Espirito Santo ayaa heysta saf dhammeystiran oo wada taam ah, xilli uu caawa leylinayo Wolves kulankiisii 150-aad.
Adama Traore ayaa ah ciyaaryahanka ugu halista badan ee ay wajaheyso kooxda martida ah, waxaana la filayaa inuu ku soo billawdo ciyaartan, maadaama uu safka ugu horreeya ee ciyaarta ka soo muuqday kulankii ugu dambeeyay ee ay Wolves garoonkeeda kula ciyaartay Bournemouth.
Arsenal laacibkeeda khadka dhexe ee Lucas Torreira ayaa taam u ah kulankan kaddib markii uu kasoo kabsaday dhaawac dhanka canqowga ah oo uu garoommada kaga maqnaa.
Macallinka Arsenal ee Mikel Arteta ayaa la rajeynayaa inuu dib ugu yeeri doono Mesut Ozil iyo Matteo Guendouzi.
>- Wolves waa guuldarro la’aan saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay labadaan kooxood wada ciyaareen, iyadoo mid guuleysatay, labo kalena barbarro la gashay Gunners.
>- Kulankan oo kale xilli ciyaareedkii hore waxa uu soo idleeyay 20 ciyaarood oo aysan Wolves guul gaarin dhammaan tartammada iyagoo garaacay Arsenal, waana guul la’aantii ugu dheerreyd ee ay kooxda martida loo yahay la kulantay kaddib 1979-kii.
>- Wolves oo waayo qurux badan ku jirta ayaa guuldarro la’aan ah siddeeddii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka ciyaartay Premier League, iyagoo adkaaday shan jeer, saddex jeerna barbarro galay, waxaana xusid mudan inay shabaqooda gool ka ilaashadeen toddobo ka mid ah siddeeddaas kulan.
>- Waxay heli karaan guushoodii afaraad oo xiriir ah ee horyaalka Ingiriiska markii ugu horreysay tan iyo intii u dhexeysay bishii December sanadkii 1971-kii illaa bishii Janaayo sanadkii 1972-kii.
>- Wolves waa kooxda kaliya ee heysata rikoor 100% guulo ah ciyaaraha Premier League tan iyo markii laga soo laabtay xannibaaddii Coronavirus.
>- Kooxda uu hoggaamiyo Nuno Espirito Santo ayaanan gool laga dhalin muddo 405 daqiiqo ah, waxaana ay jabin karaan rikoorkooda shanta kulan ee ah kulammada ugu badan oo xiriir ah ee Wolves shabaqeeda gool kaga ilaashatay ciyaaraha horyaalka sare ee Ingiriiska, waxaana rikoorkaas ay sameeyeen labo jeer oo kala duwan oo kala ah sanadkii 1959-kii iyo 1981-kii.
>- Naadiga martida loo yahay ayaa toddobo kulan bareejo ku gashay garoonkeeda xilli ciyaareedkan, mana jirto koox ka badan oo bareejo ku gashay garoonkeeda horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Arsenal ayaa guuleysatay siddeed ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay tartammada oo dhan.
>- Si kastaba ha ahaatee, Gunners ayaanan guul gaarin 17-kii jeer ee ugu dambeeyay oo ay horyaalka Premier League bannaanka kula ciyaartay kooxaha iyaga ka sarreeya dhanka kala sarraynta horyaalka, iyadoo shan jeer barbaro gashay, 12 kalena la garaacay.
>- Arsenal ayaa raadineysa inay labo kulan oo xiriir ah bannaanka ku soo adkaadaan ciyaaraha horyaalka markii ugu horreysay tan bishii Agoosto ee sanadkii tagay.
>- Arsenal ayaa guuleysatay kaliya saddex kulan 16-kii ciyaarood ee ugu dambeeyay kulammada horyaalka oo ay bannaanka ku soo ciyaartay.
>- Sidoo kale, Gunners ayaa damacsan inay saddex kulan oo xiriir ah shabaqa difaacdaan kulammada horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo November ee sanadkii 2017.
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa u baahan kaliya hal gool si uu u noqdo ciyaaryahankii labaad ee ka tirsan Arsenal, kaasoo labo xilli ciyaareed oo xiriir ah horyaalka Premier League ka dhaliya 20 gool, waxaana uu barbarreyn doonaa Thiery Henry oo ah ciyaaryahanka kaliya ee Arsenal labo fasal ciyaareed oo isku xiga u dhaliyay 20 gool oo Premier League ah.